သောသီခို: ကေအိုင်အေကို ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်၊ မိမိလုံခြုံရေးအတွက်သာ မလွှဲမရှောင်သာ တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အစိုးရသတင်းတွင်ထုတ်ပြန်
ကေအိုင်အေကို ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်၊ မိမိလုံခြုံရေးအတွက်သာ မလွှဲမရှောင်သာ တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အစိုးရသတင်းတွင်ထုတ်ပြန်
ဒီပို့ စ်ကို ဗမာစစ်သားအစိုးရရဲ့ ၀ါဒဖြန့် ချီရေးဘလော့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ပိတောက်မြေဘလော့မှ ပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီသတင်းနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး လိုင်ဇာမှ ကေအိုင်အေ တပ်မှူးငယ်အား ကျနော်တို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာမှာ အခုလိုဖြေကြားပါတယ်။
“ကျနော်က စစ်သားဗျား စစ်သားစကားပဲပြောမယ်.. ဒီကောင်တွေ(ဗမာစစ်သားတွေ) အခြေအနေမဟန်လို့ဒီလေသံပစ်လိုက်ဒါ။ သူတို့ေ-ာက်ကျင့်ဒီလိုပဲ. ခင်ဗျားတို့ ယုံလား ငါတို့ တော့မယုံဘူး.. နိုင်ငံရေးရော စစ်ရေးမှာ သူတို့ အထိနာနေဒါ။ ဒီခွေးတွေ လူလည်လုပ်နေဒါ။ ငါတို့ သိပ်စိတ်မ၀င်စားဘူး.. တံတားတွေခွဲပြီးပြီ.. ဒီကောင်တွေခေါင်းခွဲဖို့ ပဲ ခုချိန်မှာ ငါတို့ စဉ်းစားနေတယ်” ဟုလိုရင်း တိုရှင်းပြောပြီး ဖုန်းချလိုက်ပါသည်။
(ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရဘက်က ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ သတင်းစာ များမှာ သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်မှ ဧပြီလက စပြီး ကေအိုင်အေအဖွဲ့က ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများ၊ ရဲစခန်းများကို နှောက်ယှက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်များကို ဖော်ပြထားပြီး အခု တိုက်ခိုက်မှုဟာ ရေအားလျှပ်စစ် လုံခြုံရေး အတွက်သာ တိုက်ခိုက်တာ ဖြစ်ပြီး ကေအိုင်အေ အဖွဲ့တစ်ခုလုံးကို ဖိနှိပ် တိုက်ခိုက်တာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီကြေညာချက်မှာ ကေအိုင်အေကို အကြမ်းဖက် အဖွဲ့လို့ သုံးနှုန်းတာ မရှိသလို သမ္မတကြီးရဲ့ မိန့်ခွန်းပါ ကမ်းလှမ်းချက် များကိုလည်း ပြန်ဖော်ပြ ထားတာဟာ ထူးခြားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်ကို မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။)
ယနေ့ ကချင်ပြည်နယ် အတွင်း KIA အဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့ အကြား တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွား နေရခြင်းမှာ မိမိ တပ်မတော်သားများနှင့် မိမိနိုင်ငံ၏ အရေးကြီးသည့် လျှပ်စစ် စီမံကိန်းအား ကာကွယ် စောင့်ရှောက် လိုသည့် ရည်မှန်းချက် တစ်ခုတည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပြီး အခြားသော ရန်လို ဖိနှိပ်တိုက်ခိုက်လိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်များ မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။ (သတင်းစဉ်)
Posted by PKD at 1:36 AM
funny Burmese news.
don't ever believe Burmese Ta Ma Daw.